Uboshelwe ukubhunyela umyeni ngephalishi - Ilanga News
Home Izindaba Uboshelwe ukubhunyela umyeni ngephalishi
lngxabano isuswe wukungashuquli ekhanda
UMNUMZANE Dumezweni Mfekayi uthi ufuna umkakhe ahlawule ngenkomo nembuzi ngokumbhunyela ngephalishi elishisayo.
LIFUNA inhlawulo yenkomo nezimbuzi ezimbili ikhehla elibhunyelwe ngephalishi ebusweni ngumkalo emuva kokuba embuze ukuthi kungani engahloniphisile ngokuthwala ekhanda emzini wabo oseMfekaye, eMtubatuba.
Iyindaba egudwini eyokushiswa ngephalishi ebusweni kukaMnu Joseph Dumezweni Mfekaye (62), okumanje welulamela kwakhe emuva kokubhunyelwa ngephalishi eligxabhayo wumkakhe, uNkk u-Adrinet Mfekaye, kubangwa ukuthi akashuqulile ngani emagcekeni akwakhe.
Ukhishwe esibhedlela ebhandishwe ubuso.
Lesi sigameko senzeke emasontweni amabili adlule kuyiSonto ekuseni belungiselela ukuya enko-nzweni, kwazise uMnu Mfekaye ungumshumayeli ebandleni, Uku-khanya Christian Church, khona eMtubatuba.
Ekhuluma neLANGA uMnu Mfekaye, uthe usekude ukukhohlwa yinto ayenziwe ngumkakhe weminyaka ewu-23. Banezingane ezine ezihambile kuleli khaya emuva kwalesi sigameko.
Uthi bekungekhona okokuqala ukuba akhuze umkakhe ngendaba yokungashuquli ekhanda emzini wabo.
Utshele leli phephandaba ukuthi ufuna umkakhe amhlawule ngenkomo nezimbuzi ezimbili ngokumthela ngehlazo emphakathini ekubeni ehlonishwa njengoba enesikhundla nasebandleni.
“Le nto yenzeke ekuseni silungiselela ukuya enkonzweni, kwazise nomkami ulisekela lomkhokheli ebandleni. Ngesikhathi ngiqeda ukudla isidlo sasekuseni, ngiye ekhishini ngiyowasha isitsha ebengidla ngaso, kuthe ngingazelele ngabona umkami ezongena endlini engalishuqulile ikhanda.
“Ngibuzile ukuthi kungani ehamba ngekhanda emzini kababa ekubeni eganile. Uvele waphendula kabi, wakhombisa ukuthi akazimisele ukuyilalela into engiyikhulumayo. Kube sekuqala ingxabano okuthe nginganakile wavele wado-nsa ibhodwe lephalishi ebeliseziko wangibhunyela ngalo ebusweni.
“Bengiqala ngqa ukuzwa izinhlungu zaloluya hlobo. Ngiphume ngiqhasha endlini ngiyofuna usizo. Ngihlangane nomakhelwane ngacela usizo. Unginike imali ngabe sengithumela izingane ukuba ziyobiza umfana wakhona lapha endaweni onemoto ongiphuthumise emtholampilo,” kusho uMnu Mfekaye.
Uthi yize ebejwayele umkakhe ukungashuquli, kodwa bekuthi uma emkhuza asheshe alifake iduku ngaphandle kokuthi baxa-bane.
“Le nto ayenzile iyihlazo futhi ingehlise isithunzi nasebandleni. Empeleni kangazi ukuthi ngizobabuka kanjani abantu emuva kwale nto. Ngizimisele ukuba siyilungise le nto, kodwa-ke ngaphambi kokuba abuye lapha ekhaya kuzomele angigeze ngenkomo nembuzi ngokungishisa bese ehlawula ngembuzi yesibili ngo-kuhamba ngekhanda emzini kababa,” esephetha.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe ukhona owesifazane oboshiwe ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza.
Uthi uvelile eNkantolo yeMantshi yaseMtubatuba ngoLwesihlanu kanti uzobuyela maduzane.
Previous articleuvalo lwe-corona kwabantula amanzi ahlanzekile
Next articleizinsolo zokudlwengulwa kotholwe elenga esefile